Ahoana ny tombotsoan'ny CRM Ecommerce amin'ny orinasa B2B sy B2C | Martech Zone
Ahoana ny tombotsoan'ny CRM Ecommerce amin'ny orinasa B2B sy B2C
Alakamisy Febroary 10, 2022 Alakamisy Febroary 10, 2022 Roman Davydov
Nisy fiovana lehibe teo amin'ny fitondran-tenan'ny mpanjifa dia nisy fiantraikany tamin'ny indostria maro tato anatin'ny taona vitsivitsy, fa ny sehatry ny e-varotra no voa mafy indrindra. Ny mpanjifa mahay nomerika dia nirona tamin'ny fomba fanao manokana, traikefa fiantsenana tsy misy fikasihana ary fifaneraserana amin'ny fantsona maro.
Ireo anton-javatra ireo dia manosika ireo mpivarotra an-tserasera handray rafitra fanampiny hanampiana azy ireo amin'ny fitantanana ny fifandraisan'ny mpanjifa sy hiantohana ny traikefa manokana manoloana ny fifaninanana henjana.
Amin'ny trangan'ny mpanjifa vaovao, ilaina ny mandrefy ny filany sy ny safidiny ary mametraka fifandraisana manokana mba tsy hahatonga azy ireo hivily amin'ny mpifaninana aminao. Mandritra izany fotoana izany, ny fahitana ny fividianany, ny fijerena ary ny tantaran'ny fividianana azy dia manampy amin'ny fanomezana tolo-kevitra mifandraika amin'izany ary miantoka ny fitazonana azy ireo. Izany rehetra izany dia mitaky fanangonana, fitehirizana, fanodinana, fampifanarahana ary fitantanana angon-drakitra mpanjifa marobe.
Ny iray amin'ireo vahaolana mendrika hodinihina dia ny fifandraisana amin'ny mpanjifa rafitra, na CRM raha afohezina.
Manodidina ny 91% amin'ireo orinasa manana mpiasa 10+ no mampiasa CRM amin'ny fizotrany.
Ny orinasa amin'ny habe samihafa dia mampihatra CRM e-varotra for:
Automation fitantanana mpanjifa
Fampandehanana fifandraisana amin'ny fantsona maro
Manangana sary feno momba ny mpanjifa
Ny marketing sy ny fizotran'ny serivisy
Mamorona foibe fitantanana mpanjifa tokana mba hanamafisana ny fahitana angon-drakitra amin'ny sampana
Ahoana no ahafahan'ny Vahaolana Ecommerce CRM mamaly ny filan'ny orinasanao
Ny CRM dia vahaolana holistic mazàna tafiditra ao anaty maritrano e-varotra mba hanomezana ireto filàna manaraka ireto:
Filàna fandidiana - Ny fitantanana mahomby amin'ny mpanjifa dia somary sarotra ary, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, dia tsy azo atao raha tsy misy foibe data azo itokisana. Vokatr'izany, ny orinasam-barotra an-tserasera dia mampiasa rafitra CRM hampifandray ireo teboka maromaro mba hanangonana ny mombamomba ny mpanjifa ao anaty tahiry angon-drakitra mahazatra ary hiantohana ny fidirana angon-drakitra tsy voasakana ho an'ny sampana isan-karazany.
Filàna analytique - Ny CRM dia afaka mampiasa ny angon-drakitra voaangona mba hamoronana hevitra momba ny fandraisana fanapahan-kevitra. Ny rafitra dia mampiasa ny angon-drakitra momba ny mpanjifa ara-bola sy ara-barotra voaangona toy ny fangatahana fikarohana, fomba fijery, ary tantara momba ny fividianana mba hamoronana mombamomba amin'ny antsipiriany, ny fitondran-tena vinavina, mamorona tolo-kevitra, mampitombo ny fahafaham-pon'ny mpanjifa, ary ahafahana mivarotra sy mivarotra.
Filàna fiaraha-miasa - Ny fanapahana ny sampan-draharaha dia mety hanimba ny famokarana ny workflows. Mba ahafahana miditra mitambatra amin'ny angon'ny mpanjifa ho an'ny varotra, varotra ary sampana hafa dia mila rafitra tokana afaka manatsotra ny fifanakalozana sy ny fidirana angona ianao. Ny CRM e-commerce dia afaka manome fidirana amin'ny mombamomba ny mpanjifa tokana, fiaraha-miasa tsy misy fiafaran'ny sampana, ary miantoka ny fiaraha-miasa manerana ny orinasa.
Ecommerce CRM ho an'ny B2B sy B2C: Tombontsoa
Na inona na inona halehiben'ny orinasanao ecommerce, ary na B2B na B2C, ny tena tanjona dia ny hisarihana, hanova ary hitazona ny mpanjifa. Ny CRM dia novolavolaina hanampiana ireo orinasa amin'ny fanatrarana ireo tanjona ireo amin'ny fanomezana azy ireo ireto tombontsoa manaraka ireto:
Vidin'ny mpanjifa feno - Ny tetika fitantanana mahomby amin'ny mpanjifa dia manomboka amin'ny fikarohana lalina momba ny mpanjifa mifototra amin'ny angona voaangona. Ny CRM dia afaka manampy ny mpivarotra an-tserasera amin'ny fanangonana angon-drakitra ary, mifototra amin'izany, dia mamolavola mombamomba mpividy 360 degre. Ny fidirana amin'ny fijerin'ny mpanjifa manerana ny sampan-draharaha dia mamela ny fitantanana ny fantsom-barotra mety, ny fahitana ny dia amin'ny fiantsenan'ny mpanjifa, ny fanaraha-maso ny hetsika, ny fampivoarana ny paikady ara-barotra kendrena, ary ny fanomezana tolo-kevitra mifanaraka amin'izany.
Advanced personnalisation - Ny CRM miaraka amin'ny fianarana milina an-trano dia afaka manararaotra ny angon-drakitra mpanjifa voaangona mba hihetsika amin'ny fahafahana mivarotra sy mivarotra, manome soso-kevitra ary manatsotra ny traikefa miantsena. Ny fomba fiasa manokana toy izany dia manampy amin'ny fampidirana mpanjifa sy hampitombo ny tahan'ny fihazonana sy ny tsy fivadihana.
traikefa amin'ny mpanjifa Multichannel – Ny fahafahana amin'izao fotoana izao amin'ny fifaneraserana omnichannel dia mamela ny mpanjifa ho mora kokoa amin'ny fividianana azy, na amin'ny alàlan'ny fivarotana finday na tranonkala na media sosialy. Mandritra izany fotoana izany, ho an'ny mpivarotra nomerika, ny fanomezana traikefa tsy misy kilema sy manokana ao amin'ny tontolon'ny fantsona marobe dia miteraka fanamby lehibe mifandraika amin'ny fampifandraisana ireo teboka maromaro sy fanangonana angon-drakitra mpanjifa cross-channel ho amin'ny foibe iray. Ny CRM dia afaka manova ny traikefan'ny mpanjifa mizarazara ho iray izay mampitambatra fantsona marobe ary miantoka ny angon-drakitra rehetra hita maso, ary ny mpampiasa dia hahazo traikefa manokana amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana rehetra.
Automation ny asa ara-barotra - Ny fahaizan'ny marketing CRM dia midika ny fanaraha-maso ny fifandraisan'ny mpanjifa mandritra ny dian'ny varotra, ny automation amin'ny varotra, ny famoronana fanentanana ara-barotra namboarina, ary ny fahafaha-manao serivisy namboarina miaraka amin'ny chatbots sy valiny mandeha ho azy. Ny fanaovana automatique ny asa ara-barotra sy ny fahatakarana ny fitondran-tenan'ny mpanjifa dia miteraka fitaizana fitarihana mahomby kokoa, fitomboan'ny fidiram-bola ary fomba fiasa manokana amin'ny dia an'ny mpanjifa.
Fanadihadiana miompana amin'ny ho avy - Ny CRM dia miasa toy ny tahiry angon-drakitra mpanjifa izay manangona, mitahiry ary mampiasa ny angon-drakitra mba handraisana fanapahan-kevitra mifototra. Noho io loharanom-pahamarinana tokana io, ny angon-drakitra dia azo ampiasaina amin'ny famokarana mombamomba ny mpanjifa amin'ny antsipiriany, manombatombana ny haavon'ny firotsahany, maminavina ny fitondran-tena, ary mamantatra ny dingana ao anatin'ny fantsom-barotra mba hampiharana ara-potoana ny tetika ara-barotra ary hanolotra tolo-kevitra mifandraika amin'izany. Ankoatra izany, ny rafitra dia afaka mamantatra ireo mpividy sarobidy sy ny fantsona tsara indrindra amin'ny fahazoana azy ireo mba hanomezana anao ny tolo-kevitra mifanaraka amin'ny hetsika mahomby kokoa.
Ny fahazoana vahaolana CRM dia mety hivadika ho fomba tsara ahafahana manara-maso ny fitantanana ny mpanjifa, manolotra fomba fiasa manokana, manatsara ny fihazonana ary ny fahombiazan'ny orinasa amin'ny ankapobeny. Ankoatr'izay, amin'ny alàlan'ny fampidirana tsy misy tsininy amin'ny maody hafa amin'ny maritrano e-commerce anao, ny vahaolana CRM dia afaka mameno tsara ny fiasan'ny tontolo iainana manontolo.
Tags: Analyticsb2b crmecommerce b2bb2cb2c crmb2c ecommerceCRMcrm tatitrafitahirizana angon-drakitra mpanjifaasa mpanjifafifandraisana amin'ny mpanjifafitateran'ny mpanjifafahitan'ny mpanjifaecommerceecommerce crmhetsika ara-barotratraikefa amin'ny mpanjifa multichannel
Roman Davydov dia Ecommerce Technology Observer ao amin'ny Itransition. Miaraka amin'ny traikefa efa-taona mahery ao amin'ny indostrian'ny IT, i Roman dia manaraka sy mamakafaka ny fironana fanovana nomerika mba hitarihana ny orinasa antsinjarany amin'ny fanaovana safidy mividy rindrambaiko momba ny varotra sy ny fitantanana fivarotana.
Gleam: Fampiharana ara-barotra natao hampitomboana ny orinasanao